Kismaayo News » Wakaalada Wararka SONNA oo 53 jirsatay
Wakaalada Wararka SONNA oo 53 jirsatay
Kn: Wakaalada Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa u dabaaldegtay aasaaska sanad guuradeedii 53aad iyadoo munaasabad weyn lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Munaasabada aasaaska wakaalada wararka ee SONNA ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin u ka mid yahay Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa ugu hambalyeeyay Madaxda iyo Shaqaalaha Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA sanadguuradii 53-aad ee ka soo wareegtay aa-aaskeedii oo ku aadaneyd 5-tii Janaayo 1964-kii.
Wasiirka oo ka hadlaayay Munaasabadda lagu xusaayay sanad-guuradii 53-aad ee aas-aaska iyo sanad guuradii 1-aad ee ka soo wareegtay markii dib loo howlgaliyay Wakaaladda SONNA oo lagu qabtay Xarunta Wasaaradda Warfaafinta ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa uu aad ugu dheeraaday dadaalkii loo galay sidii ay dib ugu howlgalshay iyo dadaalkii ay ugu suurogashay inay ka soo dhalaalaan shaqadii loo egmaday.
“In Hey’ad la kiciyo ma fududa balse juhdi dheer iyo dadaal dheer kadib waxaa noo suurtogashay in aan dib u howlgalino Wakaaladda SONNA, islmarkaana aan hirgalinno dhisme cusub, balse waan ku guuleysanay arrimahaasi oo dhan fulintooda waana ku ammaanayaa intii howshaasi ka qeybqaadatay” ayuu yiri Mudane Maareeye.
Wasiirka oo sii ambaqaadayay hadalkiisa ayaa sheegay in Wakaaladda SONNA dib loo howgaliyay sanadkii ee 2015-kii, isagoo qiray tan iyo waqtigaan ay qabatay howlo aad u muhiim ah ayna kasbatay dareenka shucuub badan iyo Wakaalado Warareed oo badan.
“ Wakaaladda Wararka ee SONNA waa isha kaliya ee laga xiga karo dhamaan wixii Warar ah ee ku saabsan gudaha Dalka Soomaaliya, waxayna masuul ka tahay soo ururinta, habeynta iyo faafinta Wararka, waxaana looga baahan yahay Hey’adaha Dawladda inay Wararka siiyaan Wakaaladda”, ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Wasiirku waxa uu ugu dambeyntii ku booriyay Madaxda iyo Hawlwadeenada Wakaaladda Wararka ee SONNA inay laba jibaaraan howshooda, si ay uga jiba keenaan masu’uuliyadda ay qaranka u hayaan, islmarkaana ka haqabtiraan shacabka Soomaaliyeed Wararka iyo dhacdooyinka Dalka gudahiisa iyo dibaddiisaba.
Si kasta ha ahaatee iyadoo 53 ay jirtey wakaalada wararka Soomaaliyeed dunidana haatan ay ka horumartay dhanka isgaarsiinta ayaa waxaa ka muuqata habacsanaan dhinaca soo gudbinta wararka iyo aqbaarta loogaga baahan yahay.
Wakaalada Wararka SONNA ayaa waxaa ay ka furatay labo xarun magaalooyinka Baydhabo iyo Beledweyne hase yeeshee wararka degmooyinka ay xarumaha ku leedahay SONNA ayaanay soo bandhigin dhacdooyinka ka jira iyo weliba aqbaaraadka ka jira.